कसरी सुरू र व्यापक भयो दसैं? – Daunne News
आर्काइभबाट (पाेष्टबहादुर बस्नेत)
पूर्वी पहाडका राई समुदायमा पनि दसैंमा गाउँका मुखियाले पूजापाठ गर्ने, मौलो हान्ने (बलि दिने) र त्यसपछि गाउँका सबैले मुखियाको हातबाट टीका लगाउने चलन रहेको धेरैको भनाइ छ। बलि दिइसकेपछि रगतको पञ्जाले घरमा छाप लगाउने र त्यसलाई मुखियाले दसैं मानेको प्रमाणका रूपमा राज्यले लिने गरेको तर्क पनि छन्। तर उक्त कुरा स्थानीय परम्परा हो वा राज्यले त्यसलाई दसैं मानेको प्रमाणका रूपमा लिन्थ्यो भन्ने स्पष्ट छैन।
उसो त, गोरखा राज्य विस्तारपछि जबरजस्ती रूपमा दसैं देशभरि फैलिएको तर्कसँग संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी पनि सहमत छैनन्।
तर कम्तिमा पनि राज्यले दसैंलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरेको भने देखिन्छ। शैक्षिक तथा न्याय सेवाहरूमा १५ दिन र अन्य कर्मचारीले फूलपातीदेखि एकादशीसम्म (हालको व्यवस्थाअनुसार) सार्वजनिक विदा पाउँछन्। त्यसका साथै उनीहरूले एक महिनाको तलब बराबर खर्च पनि पाउँछन्। फूलपातीका दिन गोरखा दरबारको दसैंघरबाट फूलपाती राजधानी ल्याएर बढाइँका साथ हनुमान ढोका भित्र्याइन्छ। दसैंघरको मूल चोक तलेजू भवानीलाई ५४ राँगा र त्यत्ति नै संख्यामा बोका बलि दिइन्छ।
मध्यपहाडमा उल्लासपूर्ण ढंगले मनाइने दसैं २०४६ सालको खुला राजनीतिक परिवेशपछि भने विवादको चपेटामा पर्यो। दसैं विशुद्ध हिन्दु चाड र दुर्गा-महिशासुर कथालाई आर्य र जनजातिबीचको राजनीतिक र साँस्कृतिक द्वन्द्व तथा प्रभुत्वका रूपमा पनि व्याख्या भयो।
‘अहिले स्वेच्छिक ढंगले दसैं मान्ने/नमान्ने वा आफ्नो ढंगले मान्न मानिस स्वतन्त्र छन्। त्यो स्वेच्छिक कुरा भयो,’ डा. लामा भन्छन्, ‘विदा, दसैं खर्च, भेटघाट जस्ता कुरा छन्। उक्त समयलाई विभिन्न र आ–आफ्नै तरिकाले मनाउने चलन पनि छ।’
दसैंलाई राज्यले पनि लामो समयदेखि प्रवर्द्धन गरेको तर्क सही देखिन्छ। तर, दसैंलाई विशुद्ध हिन्दु चाड र नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामा यसलाई जबर्जस्त रूपमा लादिएको तर्क गर्नेले आँखा चिम्लिएको अर्को पक्ष नेपालका विभिन्न जाति/जनजातिबीचको सम्बन्ध र साँस्कृतिक घुलमिल हो। जस्तै, हलेसी, बराह क्षेत्र, पञ्चकन्या, बुढासुब्बा मन्दिरहरू साझा धार्मिक स्थलका रूपमा विकास भएका छन्। कुनै जनजाति समुदायमा दसैं मान्ने तरिका यति पृथक र स्थानीय छ कि त्यसलाई अत्यन्त लामो समयदेखिको सामाजिक अन्तरघुलनले मात्र सम्भव बनाउन सक्छ।
इलाममा दसैंबारे अध्ययन गरेकी मानवशास्त्री सुसन ह्यान्गेनका अनुसार जनजाति अगुवाको आह्वानमा सशक्त ढंगले दसैं बहिष्कार गरेको त्यहाँको पुरै गाउँका मानिसले फेरि उल्लासमय ढंगले उक्त पर्व मान्न थाले। किन त्यस्तो भयो भन्ने उनको प्रश्नमा प्राध्यापक तथा जनजाति नेता डा. ओम गुरुङले उत्तर दिएका छन् – किनकि दसैं वर्ष दिनमा आउने गज्जबको समय हो, त्यतिबेला जताततै उल्लासपूर्ण वातावरण हुन्छ।